Mee Splash That a na-emechi ngwụsị izu a T Ọhụrụ Odo Ọpụpụ na Sunset Station na Crimson Pool na Red Rock Casino - pisklak.net
Mee Splash That a na-emechi ngwụsị izu a T Ọhụrụ Odo Ọpụpụ na Sunset Station na Crimson Pool na Red Rock Casino
Hey òtù, ọ fọrọ nke nta soccer oge na ị maara ihe nke ahụ pụtara… Football Kọntestị! Anyị nwere egwuregwu ọhụụ maka onye ọ bụla n’afọ a, Gridiron Glory. Bịa nweta oke nke ebube gị taa.
Nke ahụ ziri ezi, ọdụ Casinos Gridiron Glory Football Contest bụn’efu. Niile ị chọrọ bụ gị ikike ngafe kaadị ịbanye. Gaa na cha cha cha cha kachasị amasị gị, Fiesta Casino, ma ọ bụ El Cortez ma jiri kiosk debanye aha.
Etu esi debanye aha maka Gridiron Glory Football Contest
Ọ dị mfe, soro usoro ihe anọ a ma ị ga-adị njikere maka oge ịgba bọọlụ.
Kwụpụ 1: Swipe Kaadị Passing gị
Banye na akaụntụ gị website t iji koodu PIN gị. Chetaghi ntụtụ gị? Gaba na wardsgwọ Ọrụ Center ha ga-eme ka unu niile ịgbatị.
Ozugbo ị banyere, họta Gridiron Glory Enrollment tile. Duh!
Nzọụkwụ two: Usoro & Ọnọdụ
Guo Okwu Gridiron na Ọnọdụ ebube. Ọ bụrụ na ị kwenyere na Usoro & Ọnọdụ, pịa”Nabata”
Ọ bụrụ na ị kwetaghị, ekwela. Ọ dị mma. Ọnọdụ m ka mụbara!
Nzọụkwụ 3: Lelee Cool Intro Video & Họrọ Otu Gị!
Enwere otu naanị otu egwuregwu, yabụ gaan’ihu họrọ Seattle. Nnukwu ọrụ!
Kwụpụ 4: Nweta!
Ekele gị na ị debanyere aha maka ọdụ Casinos Gridiron Glory Football. Echefula inye onwe gị ụgwọ ọrụ maka ịrụ ọrụ nke ọma!
Etu esi egwu Gridiron Glory Football Contest
Kwa izu, ndị asọmpi na-ahọrọ egwuregwu NFL niile maka izu ahụ gụnyere Tọzdee, Satọdee, Sọnde, na egwuregwu abalị nke Mọnde. Maka nke ọ bụla ziri ezi bulie avatar gị ka ọ bụrụ ihe mgbaru ọsọ na mpaghara egwuregwu egwuregwu.
Otu esi emeri
Enwere ụzọ abụọ iji merie kwa izu:
Nweta ogige zuru oke maka mmetụ aka ma merie ihe nrite ozugbo dị ka egwuregwu efu, ihe oriri, na Ihe Ndị Mbanye na-aga Izu Izu ahụ – Họrọ ndị kachasị mmeri n’izu ahụ ma merie òkè gị nke $ 15,000. Ebe mbu ga enweta nkwanye $ 10,000. Nke abuo – Iri kekọrịta $ 500 fọdụrụnụ. Enwere onye nkwekọ agbatị “Egwuregwu nke Izu” ebe onye ọkpụkpọ ọ bụla na-ebu amụma akara nchịkọta. Na ihe omume nke a Tiebreaker tie, onye mbụ na-eme ka ghota enweta (Akpa, akpa mmeri!)
Nwere ike ịhụ ọkwa izu gị kwa izu, ma bụrụkwa nke kachasị mkpa oge gị. I nwekwara ike ịlele ọkwa gị d e weebụsaịtị anyịn’oge ọ bụla.
Idozi oke mmeri iji mee postseason ma ị nwere ike ịbelata maka egwuregwu postseason. Naanị akara 4 ma ọ bụ karịa aka n’oge oge oge maka ohere iji gaa n’ihu. Enwere egwuregwu anọ nke egwuregwu postseason:
Anụ Kaadị Egwuregwu nke Ọchịchị Egwuregwu “Nnukwu egwuregwu”
Naanị ịgba bọl, egwuregwu ahụ siri ike karị. Ndị na-egwu egwu ahọpụtara ka ha sonye na egwuregwu egwuregwu ga – ahọrọ karịa naanị onye meriri n’egwuregwu. A ga-enwe ihe karịrị / N’okpuru nzọ na ihe ndozi ndị ọzọ maka egwuregwu ọ bụla. Wgba egwuregwu ọ bụla na-akpali okpu agha gị n’ọhịa.
Mgbe izu 3 mbụ nke playoffs, ndị kacha elu oge 200 asọmpi kekọrịta t $50,000
Ọ niile na-agbadata na nke maka Onye ọ bụla tozuru oke maka postseason tozuru oke igwu egwu”The Big Game” ahụ. A ga-enwe ọtụtụ nzo gụnyere onye mmeri, karịrị / n’okpuru, na ịkụ nzọ. Bugharịa akara gị na ala n’ihu asọmpi ahụ.
Ndị mmeri kachasị elu nke post-oge na-ekere òkè na ọdọ mmiri $25,000.
$ 25,000 Ihe Nrite Mbụ
Jikọọ taa ma kwadebe maka oge 2015 NFL.
Anyị ga na-atụtụ ha kwa izu na blọgụ ahụ, yabụ bịa kwuo ụfọdụ ahịhịa, ma nwee anụrị!